झापाको कमलमा माटो ल्याव सञ्चालनमा - Samadarshi Sanchar
समदर्शी संचार, मङ्गलबार, ०६ माघ, २०७७, दिउँसोको ०२:०२ बजे
३ माघ, कमल / कृषिको उबरभूमि मानिएको झापामा अहिलेसम्म माटो परिक्षण गर्ने उपकरण थिएन । विज्ञानको चरम उत्कर्षमा पुगेको यो समयमा पनि किसानले पुरातन सैली अपनाउनुको विकल्प थिएन । किसानले बाली लगाउँथ्यो तर के कारणले उत्पादनमा ह्रास आइरहेछ ? किन किट पतंगको सामना गर्नुपरिरहेछे वा माटोमा अम्लियपन कति छ ? यस्तो सामान्य विषयमा समेत किसानहरु थाहा नपाई खेती गरिरहेका थिए ।
तर अब भने झापाको कमल गाउँपालिकाले पहिलो पटक माटो ल्याव सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो ल्याव सञ्चालनमा आएसँगै झापाका किसानमा केही उत्साह थपिएको छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये कमलले किसानको माटो परीक्षणका लागि पहिलो पटक ल्याव सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कमल गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दाको प्रमुख आम्दानीको स्रोतनै खेती भएको तर हालसम्म पनि माटो परीक्षण गर्ने चलन नहुँदा अपेक्षित लाभ लिन नसकेकाले ल्याव सञ्चालनमा ल्याईको गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र बोहोराले बताए ।
रसायनीक विषादीको प्रयोग क्रमिक रुपमा न्युनीकरण गरी जैविक र अर्गानिक उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्म निर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन । हाल गाउँपालिकामा तरकारी, धान र मकैका पकेट सञ्चालनमा छन् । किसानलाई एकिकृत खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्न विभिन्न पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायीक प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने गरिएको उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटीले बताए ।
गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको ल्यावले माटोका १४ ओटा पोषक तत्वको अवस्था पहिचान गर्ने कृषि प्राविधिक प्रेम पोखरेले बताए । बाली अनुसार माटोको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र आवश्यक पोषक तत्व छर्न किसानलाई सिफारिस गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
साढे ४ लाख रुपैयाँको लागतमा गाउँपालिकाले ल्याव स्थापना गरेको हो । ल्याव सञ्चालन सुरू भएलगत्तै दैनिक किसानहरु माटो परीक्षणका लागि आउने गरेका छन् । गाउँपालिकाले आफ्नै प्राविधिकहरुलाई तालिम दिलाएर जनशक्ति समेत तयार पारेको हो ।
ल्याव सञ्चालनमा आएको बारेमा टोल टोलमा किसानहरुलाई जानकारी गराईएको र आवश्यकता अनुसार प्राविधिक किसानका खेतबारीमै पुगेर नमूना संकलन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने क्रम पनि सुरू भएको उनले बताए ।